Waa maxay software Excel?
Posted by Tranquillus | Apr 5, 2022 | Shabakada
Excel waa magaca loo yaqaan software-ka ay samaysay shirkadda Microsoft, kaas oo ay si aad ah u isticmaalaan shirkadaha iyo shakhsiyaadka si ay u qabtaan hawlo maaliyadeed iyo xisaabeed iyagoo isticmaalaya xaashiyaha.
Excel ama Microsoft Excel waa codsi xaashiyaha caanka ah. Sifooyinkeeda waxaa ka mid ah is-dhexgal dareen leh iyo xisaabin awood leh iyo qalab jaantus ah kuwaas oo, ay weheliso farsamada suuq-geynta, ka dhigtay Excel mid ka mid ah codsiyada kumbuyuutarka ee ugu caansan maanta. Xaashiyaha Excel waxay ka kooban yihiin unugyo lagu habeeyey saf iyo tiirar. Waa barnaamij firfircoon, leh interface soo jiidasho leh iyo astaamo badan oo isticmaalaha.
Nooca ugu horreeya ee Excel ee nidaamka Macintosh ayaa la sii daayay 1985 kii Microsoft Windows-na waxa la sii daayay laba sano oo keliya ka dib, 1987kii.
Maxaa loo isticmaalaa codsiga Excel?
Codsiga Excel waxa loo adeegsadaa in lagu qabto hawlo badan oo ay ka mid yihiin: xisaabin fudud oo adag, abuurista liis xog, abuurista warbixinno iyo garaafyo casri ah, saadaalinta iyo falanqaynta isbeddellada, xisaabaadka iyo falanqaynta maaliyadeed, marka lagu daro in la yeesho luuqad barnaamij isku dhafan oo ku salaysan ee Visual Basic.
Codsiyada ugu caansan iyo kuwa caadiga ah waa: kharashka iyo xakamaynta dakhliga, xakamaynta alaabada, mushaharka shaqaalaha, abuurista xogta, iwm.
Barnaamijkan, waxaad si fudud u samaysan kartaa shax, waxaad ku soo bandhigi kartaa qaacidooyinka xisaabta, samayn kartaa xisaabaadkaaga, maaraynta agabka, maaraynta lacagaha, iwm.
READ Dhulalka iyo horumarka: aynu beddelno wakhtiyada!
Waa kuwee Excel ee ay inta badan isticmaalaan shirkaduhu?
Microsoft Office 365 waa mid ka mid ah xirmooyinka ugu caansan, marka laga reebo in loo isticmaalo labadaba laptops iyo xarumaha xafiisyada xafiisyada dhowr shirkadood. Qalab kala duwan, waxaa suurtagal ah in la abuuro dukumeenti leh qaabab kala duwan ama in laga faa'iidaysto qaabab ay bixiso Microsoft lafteeda.
Laakiin iyada oo aan loo eegin nooca Excel ee aad isticmaasho, guud ahaan waxay leeyihiin shaqooyin isku mid ah, naqshadeynta iyo booska walxaha qaarkood ayaa isbedeli kara, laakiin mabda'a ahaan, marka aad si fiican u maamusho nooca Excel, ma xamili kartid nooc kale.
Software-ka Excel wuxuu aad muhiim ugu yahay ganacsiyada. In ka badan software-ka, Excel waa aalad lagama maarmaan u ah shirkadda dhexdeeda, oo ku jirta ku dhawaad ​​100% iyaga, adduunka oo dhan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad abuurto oo aad habayso xaashida xisaabaadka ee miisaaniyadaynta, iibinta, falanqaynta, qorshaynta maaliyadeed, iyo in ka badan.
Barashada software-ka Excel maalmahan waxa ay noqon kartaa mid muhiimad gaar ah leh, in aad barato sida loo isticmaalo si fiicana waxa ay kuu noqonaysaa mid aad muhiim u ah, marka laga soo tago in aad qiimo ku kordhinayso CV-gaaga, iyo in aad suuqa shaqada ka dhigto mid aad ugu tartanta. Haddi aad rabto in aad aqoontaada ku xoojiso isticmaalka barnaamijkan, ha ka waaban inaad tareen bilaash ah on site our.
Waa maxay software Excel? 5-Abriil, 2022Tranquillus
horeCSE: awoodaha CSE ee xagga caafimaadka, badbaadada iyo xaaladaha shaqada
socdaHordhac Excel iyo hawlgallada aasaasiga ah